“Mohia Boasetɔ” | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Cambodian Dangme English Ewe French Ga Greenlandic Italian Kimbundu Kwangali Kwanyama Laotian Lingala Maltese Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nzema Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Sepedi Sesotho (Lesotho) Spanish Swati Tahitian Totonac Tsonga Tswana Twi Umbundu Venda Xhosa Zulu
BERE a Anita bɛyɛɛ Yehowa Dansefo no, ɛhaw ne kunu papaapa. * (Hwɛ ase hɔ asɛm no.) Ná ɔmpɛ sɛ Anita bɛkɔ Kristofo nhyiam, na ɔbaraa no sɛ mma ɔmmɔ Onyankopɔn din koraa. Sɛ ɔte sɛ Anita rebɔ Yehowa din kɛkɛ a, na ne bo afuw paa.
Bio nso, ná Anita kunu mpɛ sɛ Anita ne ne mma sua Yehowa ho ade anaasɛ ɔde wɔn kɔ asafo nhyiam. Ná ɛyɛ den ma Anita paa; ná ɛsɛ sɛ ɔpɛ kwan bi fa so boa ne mma no bere a ne kunu renhu.
Anita asɛm no ma yɛhu sɛ wo busuani bɛtumi asɔre atia wo sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛgyae Yehowa som. Anaasɛ wobɛtumi ahyia tebea foforo a emu yɛ den. Ebia woayare bere tenteenten. Ebi nso a, wo ba, wo kunu, anaa wo yere awu. Anaasɛ mpo wo busuani bi a wodɔ no agyae Yehowa som. Sɛ ɛba saa a, dɛn na wobɛtumi ayɛ na ama woakɔ so adi Yehowa nokware?
Ɔsomafo Paulo kaa sɛ: “Mohia boasetɔ.” (Hebrifoɔ 10:36) Enti, dɛn na ɛbɛtumi aboa wo ma woagyina nsɛm a ɛtete saa ano?
BƆ YEHOWA MPAE NA ƆMMOA WO
Sɛ wowɔ ɔhaw bi mu a, kae sɛ ɛsɛ sɛ wode wo ho to Yehowa so na ɔboa wo ma wogyina ano. Bɔ Yehowa mpae. Bere a Ana kunu wui mpofirim no, saa na ɔyɛe. Ná ɔne ne kunu atena mfe 30. Ana kaa sɛ: “Da bi a ɔkɔɔ adwuma no, wamma fie bio. Ná wadi mfe 52 pɛ.”
Ana adwuma nti na ɔnnwennwene pii, nanso na ɔda so ara di yaw. Dɛn na ɔyɛe? Ɔkaa sɛ: “Mekaa me komam asɛm nyinaa kyerɛɛ Yehowa, na mesrɛɛ no sɛ ɔmmoa me.” Ɔnim sɛ Yehowa boaa no, efisɛ bere biara a ɔbɛbɔ mpae awie no, na ne koma atɔ ne yam. Ɔsan kaa sɛ: “Megye di paa sɛ Yehowa bɛsan de me kunu aba nkwa mu bio wɔ owusɔre mu.”—Filipifoɔ 4:6, 7.
Yehowa ahyɛ n’asomfo bɔ sɛ ɔbɛtie wɔn mpaebɔ. (Dwom 65:2) Yehowa bɛma wɔn biribiara a wɔhia na ama wɔatumi akɔ so asom no. Yehowa bɛboa wo ma woadi no nokware wɔ tebea a emu yɛ den mpo mu.
WO NE WO NUANOM MMARIMA NE MMAA MMƆ
Ɔkwan foforo wɔ hɔ a Yehowa fa so boa yɛn ma yɛgyina tebea a emu yɛ den ano. Ɔde yɛn nuanom mmarima ne mmaa a wɔwɔ asafo no mu ama yɛn. Yɛbɛtumi asua biribi afi sɛnea anuanom a wɔwɔ Tesalonika no boaa wɔn ho wɔn ho bere a wɔhyiaa ɔtaa a emu yɛ den no. Saa bere no, na ɛsɛ sɛ wɔhyɛ wɔn ho wɔn ho nkuran paa. (1 Tesalonikafoɔ 2:14; 5:11) Wɔhyehyɛɛ wɔn nuanom mmarima ne mmaa nkuran ma wɔkɔɔ so hyiaam na wɔne wɔn ho wɔn ho bɔe. Wei boaa wɔn ma wɔkɔɔ so dii Yehowa nokware. Dɛn na yɛbɛtumi ayɛ na ama yɛakɔ so adi Yehowa nokware sɛnea Tesalonikafo no yɛe no?
Ɛhia sɛ yɛne asafo no mufo fa nnamfo na yɛhyehyɛ yɛn ho nkuran, titiriw bere a yɛakɔ tebea a emu yɛ den mu no. (Romafoɔ 14:19) Ɔtaa ne ɔhaw afoforo maa ɔsomafo Paulo huu amane, nanso Yehowa maa no akokoduru ma ɔgyinaa ano. Ɛho nhwɛso bi ne sɛ, Yehowa maa anuanom mmarima ne mmaa kɔhyɛɛ Paulo nkuran. Ɔsomafo no kaa ne nnamfo no ho asɛm sɛ: “Wɔabɛyɛ aboafoɔ a wɔahyɛ me den.” (Kolosefoɔ 4:10, 11) Ná saa anuanom no dɔ Paulo. Enti bere a ɔhia mmoa no, wɔkyekyee ne werɛ hyɛɛ no nkuran. Ebia wobɛkae bere bi a anuanom a wɔwɔ w’asafo mu kaa asɛm bi anaa wɔyɛɛ biribi de hyɛɛ wo nkuran.
HWEHWƐ MMOA FI MPANYIMFO NO HƆ
Yehowa de asafo mu mpanyimfo nso ama yɛn. Saa mmarima yi bɛtumi ahyɛ wo nkuran na wɔde Bible mu afotu pa ama wo. Wɔte sɛ “mframa ano huntabea ne ahum ano dwankɔbea, asase kesee so nsutene ne asase wesee so botan kɛseɛ nwunu.” (Yesaia 32:2) Ɛyɛ awerɛkyekye sɛ yɛahu sɛ saa anuanom yi ayɛ krado sɛ wɔbɛboa yɛn. Enti sɛ nneɛma mu yɛ den ma wo a, kɔhu mpanyimfo no. Wɔbɛtumi aboa wo ma woakɔ so asom Yehowa.
Nokwasɛm ne sɛ, mpanyimfo no rentumi nni wo haw nyinaa ho dwuma mma wo. Wɔyɛ nnipa a wɔtɔ sin te sɛ wo ara. (Asomafoɔ Nnwuma 14:15) Nanso sɛ wokɔ ɔpanyin bi hɔ na ɔne wo bɔ mpae na ɔka wo haw no ho asɛm kyerɛ Yehowa a, wo koma bɛtɔ wo yam. (Yakobo 5:14, 15) Ɛho nhwɛso ni. Onua bi yaree dendeenden mfe pii wɔ Italy, na mpanyimfo no hyɛɛ no nkuran. Onua no kaa sɛ: “Anuanom yii ɔdɔ adi kyerɛɛ me, na na wɔtaa bɛsra me, na ɛno boaa me ma metumi gyinaa yareɛ no ano.” Sɛ wokɔ ɔhaw bi mu a, Yehowa pɛ sɛ wohwehwɛ mmoa fi mpanyimfo no hɔ.
FA W’ADWENE SI YEHOWA SOM SO
Sɛ yɛde yɛn adwene si Yehowa som so a, yɛbɛhu sɛ Yehowa boa yɛn. Saa na John yɛe. Bere a ɔdii mfe 39 no, ɔhuu sɛ wanya kokoram bi a ɛyɛ hu. Ná ɔnhu nea enti a ɛsɛ sɛ yareɛ a ɛte saa bɔ no, efisɛ na ɔyɛ aberante koraa. Ná ɔdwene ne yere ne ne ba a wadi mfe mmiɛnsa pɛ no ho. Ɔkaa sɛ: “Ná ɛsɛ sɛ me yere hwɛ me ne yɛn ba kumaa no, na ɔsan ne me kɔ ayaresabea bere nyinaa.” Ayaresa a na wɔde ma John nti, na ɔtaa yɛ mmerɛw, na na ne yafunu nso yɛ no yaw. Ɛnyɛ ɛno nko. Ná John papa nso yare dendeenden ma enti na ɛsɛ sɛ obi tena ne ho.
Dɛn na ɛboaa John ne n’abusua saa bere a emu yɛ den no mu? Ɛwom sɛ na John taa yɛ mmerɛw deɛ, nanso ɔhwɛɛ sɛ n’abusua de wɔn adwene bɛsi Yehowa som so. Ɔkaa sɛ: “Ná yɛkɔ asafo nhyiam nyinaa, yɛkɔ asɛnka nnawɔtwe biara, na sɛ tebea no mu yɛ den sɛ dɛn mpo a, na yɛyɛ abusua som.” John huu sɛ ɛho hia sɛ ɔhyɛ ɔne Yehowa abusuabɔ mu den. Mfiase no deɛ, ne ho dwirii no, na ɛhaw no paa, nanso ankyɛ na ne koma tɔɔ ne yam. Ná ɔnim sɛ Yehowa dɔ no, na ɔhyɛɛ no den ma ɔtumi gyinaa ne haw no ano. Sɛ dadwene hyɛ wo so anaa ehu ka wo a, Yehowa bɛtumi aboa wo sɛnea ɔboaa John no. John ka sɛ: “Yehowa bɛtumi ahyɛ wo den, sɛnea wahyɛ me den no.”
Sɛ wokɔ ɔhaw mu a, kae Paulo asɛm yi: “Mohia boasetɔ.” Bɔ Yehowa mpae na fa wo ho to no so. Wo ne anuanom a wɔwɔ asafo no mu mmɔ, hwehwɛ mmoa fi asafo mu mpanyimfo hɔ, na fa w’adwene si Yehowa som so. Sɛ ɛnnɛ mpo wowɔ ɔhaw bi a, ɔbɛboa wo, na saa ara nso na ɔhaw biara a wobɛhyia daakye no, ɔbɛboa wo ma woagyina ano.
^ nky. 2 Wɔasesa edin ahorow no bi.